पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि भय पछी बढ्यो हवाइ भाडा पनि हेर्नुस कहाँ जान कति? – Ap Nepal
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि भय पछी बढ्यो हवाइ भाडा पनि हेर्नुस कहाँ जान कति?
नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएसँगै हवाइ सेवा’प्रदायक कम्पनीले हवाई भाडा ब’ढाएका छन् । वायुसेवा सञ्चा’लकको छाता सङ्गठन वायुसेवा सञ्चा’लक सङ्घले बढेको इन्धनको मूल्यअनुसार भाडा वृद्धि गरिएको ज’नाएको छ ।
सङ्घले आज विज्ञ’प्ति जारी गर्दै सङ्घमा आब’द्ध वायुसेवा कम्पनीले शनिबा’रदेखि लागू हुने गरी भाडा बढाएको उल्ले’ख गरेको छ । निगमले चैत ३ गते राति १२ बजे’देखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा प्रति’लिटर रु दुई बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअ’नुरुप हवाई इन्धनको मूल्य जे जति घट’बढ हुन्छ सोही अनुपातमा स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य बढाइएको सङ्घ’ले जनाएको छ ।
सङ्घ’का प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माका अनुसार हवाई गन्त’व्यमा सावि’कको मूल्यमा सबैभन्दा बढी रु ९० र कम्तीमा छोटो दूरीमा रु पाँच भाडा बढेको छ । काठमाडौँ–धनगढी गन्त’व्यमा रु ९०, काठमाडौँ–भद्रपुरमा रु ६० भाडा बढेको छ भने पर्वतीय उ’डानमा रु ७० बढेको छ ।
हवाई इन्ध_नको मूल्य प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ थ’पघट हुँदा भाडा हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था सरका’रले गरेको छ । आयल निमगले हालै मात्र हवाइ इन्धनमा प्रति’लिटर रु दुई मूल्य बढाएको थियो । बढेको इन्धनअनुसारको भाडादर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधि’करणबाट स्वीकृ’तसमेत प्राप्त भएको सङ्घले जनाएको छ । – इताजा खबरबाट
Prev‘दोहोरी च्याम्पियन’ बिवा दको भित्री कुरा बा हिरियो । कल्पना दाहालले मुख खोलिन्, चन्द्र शर्माले यस, कारण ‘भाईरल-साईरल’ भनेका रहेछन्-हेर्नुस (भिडियो सहित )
Next‘नेपाल गएर बिहे गर्छु’- ४० वर्ष भारतमा जेल-जीवन बिताएका दुर्गाप्रसाद